Socodka dalxiiska ee u dhexeeya Azerbaijan iyo Bulgaria ayaa si weyn kor ugu kacay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Socodka dalxiiska ee u dhexeeya Azerbaijan iyo Bulgaria ayaa si weyn kor ugu kacay
Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Bulgaria War Deg Deg Ah • Investments • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Azerbaijan iyo Bulgaria waxay aad u daneynayaan inay balaariyaan iskaashiga dhamaan dhinacyada oo ay ku jiraan dalxiiska, Nikolay Yankov, Safiirka Bulgaria ee Azerbaijan ayaa wareysi uu dhawaan siiyay Trend Publication ku sheegay.
Safiirka ayaa sheegay in qulqulka dalxiis ee u dhexeeya Azerbaijan iyo Bulgaria uu si weyn u kordhay markii la bilaabay Baku aan joogsi lahayn oo duulimaadka Sofia ah.
"Tirada fiisooyinka la soo saaray ee muwaadiniinta Azerbaijani ayaa kordhay ugu yaraan 40 boqolkiiba tan iyo markii la furay duulimaadka, waxaana aaminsanahay in sanadkaan isbedelka wanaagsan uu sii socon doono ka dib markii dib loo furay duulimaadyadii caadiga ahaa guga," ayuu yiri.
Safiirka ayaa hoosta ka xariiqay in hadafku yahay in la gaarsiiyo natiijooyin u muuqda kuwa u muuqda muwaadiniinta Bulgaria iyo Azerbaijan.
"Hadda waxaa jira fursado badan oo xiriir dhow oo ka dhexeyn kara dadkeenna iyo xiriirro aad u qoto dheer oo xagga ganacsiga ah, xiriir dhaqaale oo aad u firfircoon," ayuu Yankov carabka ku adkeeyay.
Dheeraad ah, isaga oo taabanaya fududaynta nidaamka fiisaha ee u dhexeeya dalalka, danjiruhu wuxuu sheegay in Bulgaria aysan ku soo rogin xeerar fiiso hal dhinac ah dalalka kale, laakiin ay raacayso siyaasadda Midowga Yurub ee arrintan la xiriirta.
“Safaaraddeenu waxay u shaqeysaa sida ku xusan Heshiiska u dhexeeya Midowga Yurub iyo Azerbaijan ee ku saabsan fududeynta bixinta fiisooyinka [ujeedada heshiiska, oo dhaqan galay Sebtember 1, 2014, waa in la fududeeyo, iyadoo lagu saleynayo is-aamminaad, bixinta fiisooyinka joogitaanka loogu talagalay ee aan ka badnayn 90 maalmood muddada 180 maalmood ah ee muwaadiniinta EU iyo Azerbaijan].
Qeybta qunsuliyada ee safaarada ayaa had iyo jeer ka shaqeysa awooddeeda buuxda si ay jawaab deg deg ah uga bixiso shuruudaha codsadayaasha fiisaha waxayna isku dayaan inay ku sii socdaan codsiyada fiisaha sida ugu macquulsan.